Weerarada diyaaradaha aan la wadin ee US - BBC Somali
Weerarada diyaaradaha aan la wadin ee US
Tan iyo bishii, January 2009 ku dhowaad 2,500 qof, ayaa lagu dilay Pakistan, weerar ay ka dambeeyeen diyaaradaha aanay cidi wadin ee dalka Maraykanka iyo weerarada ay qaadeen maleeshiyada Islaamiyiinta. Muuqaalada hoose, waxay muujinayaa sida saldhigyada ay ku xoog badnaayeen maleeshiyada Islaamiga ah ah ee ku dhowaa xadka Afghanistan ay diyaaradaha aan la wadin ee Maraykanka u bartilmaameedsadeen, iyo sidoo kale weeraro ay Pakistan oo dhan ka fuliyeen maleeshiyooyinka Islaamiga ah.
Image caption Weerarada
Image caption Dhimashada
Weerarada gantaalaha ee diyaaradaha aan la wadin ee Maraykanku ku qaadeen goobaha qabaa’ilku dego ee gudaha dalka Pakistan ayaa in badan sadex jibaar kordhay intii uu maamulka hayay madaxwayne Obama, sida ay muujinayso cilmi-baaris ay samaysay laanta Urdu-ga ee BBC.
Marka loo barbar-dhigo 25 weeraro noocaas ah oo dhacay intii u dhaxaysa January 2008 iyo January 2009, waxaa jiray ugu yaraan 87 weeraro noocaas ah intii u dhaxaysa markii uu xafiiska qabtay madaxwayne Obama 20 January 2009 iyo dhamaadkii June 2010.
In ka badan 700 qof, ayaa lagu dilay weeraro noocaas ah intii uu xukunka hayay Mr Obama, marka loo barbar-dhigo in wax yar ka hoosaysa 200 intii uu xukunka hayay ninkii maamulka kaga horeeyay ee George W Bush.
Weerarada rogaal-celinta ee Maleeshiyada ee isla xilligaas ayaa ka sii dhibaato badnaa. Kooxaha xagjirka ah waxay weeraro qaadeen in ka badan 140 jeer gobo kala duwan oo dalka Pakistan ah, iyagoo dilay in ka badan 1,700 oo qof, dhaawacayna boqolaal kale, sida baaritaanka BBC lagu ogaaday.
Iyadoo weerarada maleeshiyooyinka aan lagu tilmaami Karin aargudasho toos ah ee weerarada diyaaradaha aan la wadin, ayaa hadana waxay qayb xoog leh ka yihiin dagaalka lagula jiro Maraykanka iyo xukuumadda Pakistan oo iyagu weeraro ku haya xarumaha ay ka duulaan Islaamiyiinta xagjirka ah ee gudaha Pakistan.
Isla xilligaas, 18-bilood, in badan oo kale oo kor u dhaafaysa 2,500 qof, ayaa ku dhintay weerarada ciidamada Pakistan iyo dagaalo dhexmaray ciidamada iyo maleeshiyooyinka. Tirade rasmiga ah way adag tahay in la helo.
Meelo ay ka mid yihiin Swat iyo Koonfurta Waziristan oo ay weerareen military Pakistan, ayaa warbaahinta madaxa banaan iyo kooxaha kaleba ay ka xiran tahay in ay galaan.
Kororka weerarada diyaaradaha aan la wadin ayaa ka dambeeyay isbadal la sheegay in lagu sameeyay siyaasadaha Maraykanka oo ahaa in la baahiyo howlgalada loo isticmaalo. Waxaa loo adeegsan jiran in lagu bartilmaameedsado kooxaha looga shakiyo al-Qaeda, iyadoo hadda lagu soo daray Taliban-ka Pakistan oo la rumaysan yahay in ay gabaad siiyaan hogaamiyayaasha iyo howl-wadeenada al-Qaeda.
Weeraradan, ayaa xoogooda waxay ka dhacayeen waqooyiga Waziristan, iyo gobolada deriska la ah ee Koonfurta Waziristan oo noqday bartilmaameedka labaad.
Iyadoo in ka badan 700 qof ay ku dhinteen weeraradan, ayaa shaacinta aqoonsiga dadka ku dhinta weerarada xukuumadaha Pakistan iyo Maraykanka ayaa ka badnayn tusaalooyinka tobanaan ah.
Waxaa jiray guulo la tilmaami karo oo Maraykanka iyo Pakistan ay gaareen, oo ay ku jiraan in ay dileen hogaamiyihii maleeshiyada Taliban ee Paksitan, Baitullah Mehsud bishii August ee la soo dhaacay iyo dhowr qof oo kale oo lagu tilmaamay hogaamiyayaasha sare ee al-Qaeda.
Xogta ay uruurisay BBC Laanta Urdu, waxay muuinaysaa in weerarada maleeshiyada ay yaraadeen markii Mehsud la dilay kadibna ay jiilaalkii la soo dhaafay in kordheen markii ciidamada Pakistan ay weerarka ku qaadeen koonfurta Waziristan. Weerarada diyaaradaha aan la wadin ay qaadaan ayaa sare u kacay markii howlgalada lagu dhawaaqay in ay dhamaadeen, ciidamada Pakistanna ay diideen in ay ku sii wadaan weerarka oo ay u gudbaan waqooyiga Waziristan, iyadoo dowladda Maraykanku ay doonaysay in la sii wado.
Pakistan ayaa si joogto ah ugu doodaysay in weerarada ay yihiin kuwo dhib u keenaya, oo aysan ahayn kuwo caawinaya dagaalka lagula jiro xagjirnimada, iyagoo sheegay in ay kiciyaan carada dadwaynaha ee ka dhanka ah dowladda iyo maraykanka, isla markaana ay kordhiyaan taageerada loo hayo maleeshiyada.
Dhinaca kale, Maraykanka, oo inta badan aan xaqiijin weerarada diyaarada aan la wadin ay qaadeen, ayaa inta badan muujinaysay in uu jiro isfaham ku aadan adeegsigooda oo u dhaxeeya labada wadan.
Hay’adda sirdoonka Maraykanka, ayaa diiday in ay hadasho warkan.
Taliban, waxay sheegtay in weerarada diyaaradaha aan la wadin ay ka dhigeen kuwo ay ka sii go’an tahay in ay dagaalamaan, balse waxay qireen in weeraradaas ay carqaladeeyeen howlgaladooda.
Xogtan, waxaa la isku soo uruuriyay intii u dhaxaysay January 2009 iyo July 2010, waxaana shaqadaas qabtay Laanta Urdu ee BBC. Waxay salka ku haysaa warbixinno ay soo direen weriyayaasha BBC World Service correspondents oo ka shaqeeya waqooyiga Pakistan iyo aagaga qabaa’ilka.